ज्योतिको कोठामा मध्यरात होटल मालिक छिरे, अनि यस्तो प्रस्ताव राखे ! [भिडियाेसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
ज्योतिको कोठामा मध्यरात होटल मालिक छिरे, अनि यस्तो प्रस्ताव राखे ! [भिडियाेसहित]
इटहरी, मंसिर १० । ज्योति मगर पटक-पटक विवाद र चर्चामा आउने लोक गायिका हुन्। उनले गर्ने क्रियाकलाप एवं पहिरनका कारण ज्योति विवाद र चर्चामा आउने गरेकी छन् ।
यसैबीच, फेरि अहिले उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएकी छन् । अहिले भने उनी अभिव्यक्ति र पहिरनका कारण नभई अर्कै तरिकाबाट चर्चामा आएकी हुन् । अहिले ज्योति चर्चामा आउनुको कारण हो- मध्यरातमा उनको कोठामा होटल सञ्चालक पस्नु !
याे पनि पढ्नुस हट गायिका ज्योती मगरको अर्को धमाकेदार गीतको भिडियो सार्वजनिक, गीतले लियो भाइरलरुप
इटहरीको एक होटल सञ्चालकले ज्योति माथि गरेको हर्कतका कारण अहिले उनी फेरि चर्चामा आएकी छन् । होटलमा बसिरहेकी ज्योतिको कोठामा होटल साहु आउँछन् । अनि उनले भन्न थाल्छन्- सँगै बसेर बियर खाउ, पहिलो भेटमासंगै एक गिलास मात्र भए पनि पिउ भन्दै करकाप गर्छन् ।
याे पनि पढ्नुस ज्योति मगरलाई आमा बन्ने रहर:छोरी भए गर्भपतन, छोरा भए मात्र जन्म दिन्छु
ज्योति भने नकार्छिन् । हुन त ज्योतिले सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्तो नाटक गरेको हुनसक्छ । तर, उनैले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि जपत्याएर पनि सुखै छैन । होटल सञ्चालकको नाम भने खुलाईको छैन । ती होटल सञ्चालकले ज्योतिसँग के-के कुरा गरे ? हेर्नुस् तलको भिडियो
याे पनि पढ्नुस ज्योति मगर भन्छिन्, ‘विवाह पनि भएको छैन, कन्या पनि होइन’ [भिडियोसहित]
ट्याग्स: Itahri, Jyoti Magar